सुनसरीको देवानगंजमा इन्भेष्टमेन्ट बैंक « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिले सुनसरीको देवानगंज गाँउपालिकामा आफनो ८० औं शाखा विस्तार गरेको छ । देवानगंज गाँउपालिका वडा नं. २ स्थित देवानगंज बजारमा खोलिएको यो शाखाले स्थानीय ५० हजार जनतालाई वित्तिय सुविधा प्रदान गर्नेछ । बैंक परिसरभित्रै केही समयमा नै एटिएम सेवा पनि संचालनमा ल्याइँदैछ ।